Halkeen ka heli karaa Goobaha Left shandadaha In France? | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Halkeen ka heli karaa Goobaha Left shandadaha In France?
France waxay hoy u tahay kumanaan ka mid ah soo jiidashada. Laga soo bilaabo mid taariikhi ah Eiffel Tower in Paris si ay xeebaha pebbled ee Nice, dalka waxyaalo aan dhammaadka lahayn in ay sameeyaan. Laakiin waxa haddii aad booqasho ku Layover a, ama aad hore u hubiyey ee hotel iyo tareen aanu ka tago saacadood? Halkii u furnaa aad boorsooyinka oo dhan magaalo oo kala duwan, naftaada ka heli goob boorsooyinka bidix agagaarka France in uu ka tago aad boorsooyinka oo wuxuu ku raaxaysan your maalin Kanu waa warka culus-free.
Sida aan ku sheegay, dalka waxaa ka buuxa meelo inuu ka tago aad boorsooyinka, in kastoo gartaan sida u fiican ee aad ku xidhan xaaladdaada.
Goobaha Left shandadaha In Garoomada
Haddii aad booqanaysid magaalo on Layover a, aad heshay fursado badan ay ku kaydiso bacaha aad. Paris ayaa laba garoomada diyaaradaha ugu weyn, Charles De Gaulle (CDG) iyo Paris Orly (ORY), iyo labada dalab boorsooyinka gudahood terminal kaydinta. Inta badan shirkadaha diyaaradaha ugu weyn duuli galay Charles De Gaulle, gaar ahaan duulimaad transatlantic, halka diyaaradaha miisaaniyadda hooseeyo u muuqdaan in ay u soo duuli galay Paris Orly. Ayadoon aad garoonka diyaaradaha, waxaad ka qaadan kartaa bacaha ka dib cararkiinnu sii jeedi oo iyaga ka baxsan si ammaan ah hor jeeda magaalada galeen.
At Charles de Gaulle, waxaad ka heli kartaa sanduuqyada dhow saldhiga tareenka, taas oo gaar ahaan ka dhigaysa. Kaydinta waa laga heli karaa 06:00 si ay u 21:30, marka hubi inaad dib ugu soo laabto ka hor inta ay xiranto meesha uu.
Paris Orly waa xaalad la mid ah, la kala dooran karo boorsooyinka bidix laga heli karaa meel u dhow tareenka. Qiimaha kala duwan yihiin waxay ku xiran tahay dhowr arrimood, oo ay ku jiraan xabbadood tagay iyo size, inkastoo ay macquul guud. Saacadaha la mid yihiin kuwa CDG, ka 06:00 si ay u 21:30, sidaa darteed haddii aad dooneynin inuu ka tago aad boorsooyinka habeen loo hubiyo in aad timaadid waqtiga.
garoomada kale ee France shaqeeyaan si la mid ah, la kala dooran karo Alaabtoodii laga heli karo garoomada ugu, lugu daro Nice, Lyon, iyo Marseille. Hubi garoonka diyaaradaha ee xaafaddaada fursadaha kaydinta iyo qiimaha.
Marseilles in Tareenadu Lyon
Paris in Lyon ay tareenka
Left shandadaha Goobaha Ugu Tareen Stations
Haddii aad halkii soo mari jirey saldhiga tareenka, aad waxaa lagu soo bandhigay la ogaaaday fursadaha. Muddo Paris, Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Gare Montparnasse, iyo Gare de Marne la Vallee Chessy dalab walba ka tageen fursadaha boorsooyinka, shirkadaha kala duwan ku tartamaya in ay bixiyaan adeegyada ay.
Qiimaha adeegyadan kala duwan, lacag guri-rate ah kii hore 24 saacadood, iyo waqtiga lagu kaydiyo ugu badan ee a 72 saacadood. Qiimaha waa sida soo socota: small locker €5.50; labiska dhexdhexaad ah € 7.50; labiska weyn € 9.50. dheeraad ah kasta 24 muddo saacad waa € 5.
Saacadaha iyo goobaha sidoo kale way kala duwan yihiin sida laga soo xigtay idaacadda:
Waayo, dadka dhowaan yimid ka Bari: Gare de l'Est heerka -1 Hall Central opposite toilets from 06:00 si ay u 23:45 maalin kasta
Waayo, dadka dhowaan yimid xagga koonfureedba: Gare de Lyon Hall 3, baxo, waayo, kabsarta de Bercy 06:15 si ay u 22:00 maalin kasta
Waxay ku taallaa on bangiga bidix: Gare Montparnasse mid Level 07:00 si ay u 23:00 maalin kasta
The ugu weyn ee Paris: Gare du Nord heerka -1, soo socda si Kiraynta baabuur, on bixitaan taxi ka 06:15 si ay u 23:15 maalin kasta
cinwaanka kuwaan Disneyland: Station Marne la Vallee Chessy: heerka 1 - 07:00 si ay u 23:00 maalin kasta
Stations France gudahood
Inta inta kale ee dalka, saldhigyada badan tareen bixiyaan boorsooyinka bidix iyo hab ku haboon in ay ku kaydiso alaabtaada. Tani waa gaar ahaan u fiican tahay dadka safarka on a Eurail safarka, kuwaas oo aad dooranayso in ay habeen on raacid tareen halkii hotels. Hubi liiska maxalliga ah tareenka si aad u ogaatid ikhtiyaarada boorsooyinka ay bixiyaan. Sida dalka waa fursad aad u fiican, waayo, safarka tareenka, boqolaal wadooyinka isku xira dhan magaalooyinka iyo tuulooyinka waaweyn, you can find left luggage locations all over France.
Qiimaha guud ahaan macquul ah iyo saacadood boorsooyinka kala duwanaan karaa 24 saac helaan xiritaanka hore. tareenada ayaa sidoo kale soo bandhigi ikhtiyaarka fiican u safraya, sida safarka via tareen u baahan tahay xayiraad fog ka yar diyaarado. Waxaad ku imaan kartaa daqiiqo Diintooda hor tareenka ka tago (halkii saac, jeclaan garoonka diyaaradaha), Korka bacaha ka hor bootimaalaysiga on your tareenka, oggolaadaan in aad si loo kordhiyo wakhtiga aad ka dagantahay magaalada.
Left shandadaha Goobaha Qiyaastii The City
Haddii aad hore u la soo booqda magaalo dhowr maalmood oo kaliya hadda hubinta baxay, waxaa laga yaabaa inaad ku Nasiib. hotels badan oo Yurub bixiyaan kaydinta boorsooyinka lacag la'aan ah haddii aad tahay qof marti ah, oo aad ku noqon karto waqti kasta in ay dib u soo ceshano bacaha aad. kaasaa run ah fursadaha kale homestay, sida Airbnb. Weydii ciidankii haddii ay diyaar u qaban bacaha inta aad magaalada baadhaan, waa.
Haddii kale, magaalooyinka ugu bixiyaan fursadaha boorsooyinka bidix hareeraha magaalada, gaar ahaan meel u dhow waaweyn soo jiidashada dalxiiska. Waxaa jira qaar ka mid ah adeegyada madax-bannaan, laakiin sidoo kale shirkado badan oo waaweyn la heli karo oo dhan inta badan France.
Stasher: Stasher waa adeeg boorsooyinka isku xira safra la dukaamada iyo hotels bixiya adeegyada kaydinta a. Waa la heli karo ee inta badan magaalooyinka waaweyn ee Faransiis ah oo kuu ogolaanaya jaale online, taas oo aad u sahlan. Its website sidoo kale waa mid aad u functional iyo muujinaysaa saacadaha goobta, qiimaha, iyo dib u eegista ah ee goob kasta si safra aamini karaan ay boorsooyinka lagu kaydin doonaa si ammaan ah.
ः Olibg: Holibag waa shirkad weyn oo kale oo la heli karo oo dhan France. Similar in Stasher, goobta isku xira macaamiisha shirkadaha sida makhaayadaha, hotels, iyo dukaamo in kaydinta dalab boorsooyinka. Iyada oo boqolaal fursado kala duwan, aad ku dhawaad ​​ballan qaaday in la helo barta in ay hoos u bacaha aad, si aad ku raaxaysan kartaa maalin.
Nannybag: Haddii aad deggan tahay ee Paris, bet aad ugu fiican yahay Nannybag. adeegga ugu weyn kaydinta magaalada, Sikale bac dalabyo boqolaal goobood oo 24 saac helaan kuwa habeen xilli dambe oo dheeraad ah. Qiimaha yihiin guri € 6 halkii kiish maalinta koowaad iyo € 4 intaas ka dib. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan Nannybag waa in ay damaanad qaadaya ammaanka boorsada ay caymiska u gaar ah, taas oo macnaheedu yahay inaad leedahay nabadda guud ee maanka.
Waxaa jira sababo badan oo aad u doonayo inuu ka tago bac aad si ammaan ah ku kaydsan, haddii aad booqanaya magaalada a on a maalinta safarka ama fidinta waqti ka hor ah tareen habeenkii. Garoomada yihiin doorasho wanaagsan layovers, halka saldhigyada tareen bixiyaan qaar ka mid ah xulashada ugu fiican dalka. Haddii kale, adeegyada gaarka ah xira musaafiriinta ganacsatada ka dhigo mid hoos bacaha aad u sahlan oo fudud. Wax kasta oo kiiska, Hubi in lagu sameeyo shaqada guriga on fursadaha la heli karo, qiimaha, iyo saacadaha lagu kaydiyo si aad ka heli kartaa meelaha ugu fiican boorsooyinka bidix ee France kuu.
Hellay article “Halkeen ka heli karaa Goobaha Left shandadaha In France?” waxtar leh? Kitaabka la Save A tareenka aad tigidhada tareenka Faransiis iyo bilaabaan safarka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Halkeen ka heli karaa Goobaha Left shandadaha In France?” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-cafes-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / fr in ay ama / es iyo luuqado badan /.
bacaha shandad bidix storebags shandadaha tareen safarka travelfrance travelfree travelparis